ဂလာတိ 5: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုရှေးခယျြထက်ပညတ္တိကျမ်းတွင်အောက်ပါမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကျွန်ခံရန်အဂလာတိခရစ်ယာန်တွေကိုတိုက်တွန်းအားဖြင့်ဂလာတိ4ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ အဲဒီဆောင်ပုဒ်ဂလာတိ5မှာဆက်လက် - နှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ပိုပြီးကျော်ကြားကျမ်းပိုဒ်၏တဦးတည်းအတွက် culminates ။
ဤနေရာတွင်ဂလာတိ5ကိုဖတ်ပါ, အဲဒီနောက်ရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့ကိုတူးကွပါစို့ဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
နညျးလမျးမြားစှာတှငျ, ဂလာတိ 5: 1 ပေါလုသည်ဂလာတိနားလည်ချင်ခဲ့သမျှကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါသည်:
လွတ်လပ်မှုနှင့်ကျွန်စနစ်အကြားဆနျ့ကငျြဘဂလာတိ, ထို့နောက်အရေဖျားလှီးများ၏ရိုးရာဓလေ့အပါအဝင်ဓမ်မဟောငျးကမျြးဥပဒကိုလိုက်နာဖို့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုအတွက်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဂလာတိ5ပေါလု၏ပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်၌သူ၏အဓိကတွန်းကန်အားယခုအထိဆိုအဖြစ်ဝင်ဖြစ်ဆက်လက် ခရစျတျောအားလုံး (v ။ 2) မှာသူတို့ကိုအကြိုးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူကသူတို့ကိုမိမိတို့လုပ်ရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားမှုမှတဆင့်ဖြောင့်မတ်လိုက်ပို "ခက်ခဲကြိုးစား," သာ. သူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ရာမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကင်းကွာမယ်လို့နားလည်ချင်တယ်။
ကျမ်းပိုဒ် 7-12 တွင်ပေါလုသည်နောက်တဖန်သူတို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ခဲ့သောဂလာတိသတိပေးပေမယ့် Judaizers များ၏မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များလမ်းလွဲသူတို့ကိုခေါက်ခဲ့သည်။ မဿဲ 22 မှတစ်ဦးကိုကိုးကား - သူသူတို့ကိုယ်သူတို့အဖြစ်သူတို့၏အိမ်နီးချင်းများမေတ္တာရှင်အားဖြင့်ပညတ်တရားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကိုတိုက်တွန်း: 37-40 - ဒါပေမယ့်ကယျတငျတျောမူခွငျးအဘို့အလိုငှါဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အပေါ်မှီခိုအားထား။
အခန်း၏ဒုတိယတစ်ဝက်တစ်ဦးဘဝကိုအကြားတစ်ဦးဆနျ့ကငျြဘဇာတိပကတိနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားမှတဆင့်နေထိုင်ခဲ့တစ်ဦးဘဝတစျဆငျ့နေထိုင်ခဲ့ပါရှိသည်။ - ဤခရစ်ယာန်တွေဟာအကြားတစ်ဦးအလွန်ဘုံအယူအဆဖြစ်သည့် "ဇာတိပကတိ၏အကျင့်" နှငျ့ "ဝိညာဉ်တော်၏အသီး," ၏ဆှေးနှေးသို့ပို့ဆောင် မကြာခဏနားလည်မှုလွဲပေမယ့် ။
ကျနော်တို့ကမျက်စိ-င့်ဖောက်သည့်တစ်နည်းနည်းင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအထူးသဖြင့်ကျမ်းပိုဒ်ထွက် single ချင်:
ငါသည်သင်တို့လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကို castrated ရစေခြင်းငှါ, နှောင့်ယှက်သူမြားဆန္ဒရှိ!
ဒုက္ခပဲ! ပေါလုသညျကိုသူတို့အရေဖျားလှီးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လာမှတစ်ဦးအလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းမိမိသိုးစုမှဝိညာဉ်ရေးရာပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လူများမှာဒါစိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုနည်းတူ - သူသညျဘုရားသခငျ၏နောက်လိုက်အလွဲသုံးစားလုပ်သောဘုရားသခငျ၏ Self-ကွှေးကျွောနောက်လိုက်မှာတရားဝင်မျက်ထွက်တော်မူ၏။
သို့သော်ဂလာတိ5၏အကျော်ကြားဆုံးသောအဘို့ကိုသာဝိညာဉ်တော်ကိုလူအသီးကိုမှပေါလုရဲ့ရည်ညွှန်းပါရှိသည်:
22 သို့သော်ဝိညာဉ်တော်၏အသီးချစ်ခြင်း, ဝမ်းမြောက်ခြင်း, ငြိမ်သက်ခြင်း, သည်းခံခြင်း, ကြင်နာမှု, ကောင်းမြတ်ခြင်း, ယုံကြည်ခြင်း, 23 နူးညံ့သိမ်မွေ့, Self-ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာဆန့်ကျင်ဘယ်တရားမျှမပါပဲ။
ဂလာတိ 5: 22-23
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလူတွေမကြာခဏဝိညာဉျတျော၏ "အသီးအပွ" နဲ့ဝိညာဉ်တော်၏အသီးရောထွေး - သူတို့အခြားသူများကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်ကောင်းမြတ်ခြင်း၏အသီးရှိစဉ်အခါအချို့သောခရစ်ယာန်, မေတ္တာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအသီးရှိယုံကြည်ပါတယ်။ ဤမမှန်ကန် ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သော ။
အနည်းကိန်း - - ပိုကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အာဏာအပ်နှင်းထားပါသည်အဆိုပါအမှန်တရားအားလုံးခရစ်ယာန်တွေဟာဝိညာဉ်တော်သည်၏ "အသီး" ကြီးထွားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Key ကို Themes
ရှင်ပေါလုသည်အစဉ်မပြတ်ကျွန်ခံတစ်ဦးပုံစံအဖြစ် concept ကိုပယ်ချ။ သူသည်အစဉ်မပြတ်သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလက်မခံဖို့ဂလာတိအသနားခံ။
ဤအခနျးတှငျတစ်ဦးကအလယ်တန်းဆောင်ပုဒ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှစ်ခုစလုံးနည်းလမ်းတွေ၏ယုတ္တိအကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အပေါ်အကျင့်ယိုယွင်း, ညစ်ညူး, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် - ငါတို့သည်ကိုယ်တန်ခိုးအားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အစွမ်းသတ္တိအားအောက်တွင်အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, ငါတို့နှင့်အခြားသူများမှမထိခိုက်စေသည့် "ဇာတိပကတိ၏အကျင့်," ထုတ်လုပ်ရန်။ ကျနော်တို့ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောမှလက်နက်ချသည့်အခါ, သို့သော်ကျနော်တို့သဘာဝတစ်ခုပန်းသီးသစ်ပင်သဘာဝကျကျပန်းသီးထုတ်လုပ်တူညီသောလမ်းအတွက်ဝိညာဉ်တော်၏အသီးကိုသီး။
မှတ်ချက်: ဒီအခနျးတှငျ-by-မျြးအခနျးကွီးပျေါအခွခေံဂလာတိ၏စာအုပ်ရှာဖွေစူးစမ်းတစ်ဆက်လက်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ များအတွက်အကျဉ်းချုပ်ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ အခန်းကြီး 1 , အခန်း2, အခန်း3, နှင့် အခနျးကွီး4။
အဘယ်ကြောင့်နံပါတ်7ကိုလာဘျကောငျးတဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်
ယရှေုသညျဗိမာနျတျော (: 15-19, Mark 11) ဆေးကြော
ဂလာတိ 2: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
ဂျိမ်း McKeever အားဖြင့်အောင်ပွဲကမျြးစာကိုစာဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်
Actinides (actinides စီးရီး)
အဘယ်သူသည်အဘယျသို့ပါသလား - Composer, Lyricist, Librettist
ထိပ်တန်း 10 Classic အမျိုးသမီးနိုင်ငံအဆိုတော်များ
Homer Epic ထံမှသိပါ 19 က Epic စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
Manjusri, ပညာသည်၏ဗုဒ္ဓဘာသာ Bodhisattva
Litha Craft စီမံကိန်းများ
Hil စိန့် Soul အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Inartistic အထောက်အထား (အပြောအဆို)
Veracruz ၏ Siege
အစောပိုင်း 1800 ခုနှစ်တွင်ပြည်သူ့ဘဝအတွက်အမျိုးသမီးများပါဝင်လာခြင်း
အဘယ်ကြောင့် Birds ဂိမ်းဒိုင်နိုဆော-size ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
ဒီရေတော (Grey က) Snapper Catching များအတွက်ငါးဖမ်းသိကောင်းစရာများ
လမ်းကြမ်းစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ 8 ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ